Dad Ku Dhintay Shil Ka Dhacay Duleedka Magaalada Muqdisho – Kismaayo24 News Agency
Dad Ku Dhintay Shil Ka Dhacay Duleedka Magaalada Muqdisho
by admin 18th September 2019 041
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Shil sababay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo saakay waaberigii hore ka dhacay duleedka Magaalada Muqdisho.
Shilkan ayaa waxaa uu sigaar ag uga dhacay deegaanka Carbiska ee ku yaalla duleedka Muqdisho,isla markaana waxaa uu yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari nooca Xamuulka qaada iyo mid yar oo kamid ah kuwa raaxada ah.
Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in gaariga Xamuulka uu ku dul dhacay gaariga yar,kaasi oo marayay wadad,waxaana xiligaas gaariga saarnaa dad shacab ah,waxaana halkaas ku geeriyooday 8 ruux oo kamid ah dadkii saarnaa lada gaari.
Sidoo kale shilka ayaa waxaa ku dhaawacmay dad shacab ah oo la socday gaariga weyn,waxaana goobta uu shilka ka dhacay gaaray dad shacab ah oo gurmad u sameeyay dadkii halkaas wax ku noqday,iyadoo dhaawacyada loo qaaday goobaha Caafimaadka.
Wadada isku xirta Magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa dhowr jeer sidaan oo kale uga dhacay Shilal kala duwan.
World Bank oo mashaariic horumarineed u ballan qaaday gobalka Banaadir
Xukuumada Somaliya oo Soo Dhoweysay Aqbalaada Safiirkeeda Mareykanka.
Akhriso: Seddex masuul oo ka qeyb galeysay caleema saarka madaxweyne farmaajo oo af soomali ku soo daray khudbadahooda
Tifaftiraha K24 22nd February 2017
Madaxweyne Farmaajo oo ka tanaasulay Dhalashadii Maraykanka.
admin 1st August 2019
Top NewS: Masuuliyiinta SOmaliland ka soo jeeda ee DF Ku Jira Oo Qaadacey Go’aamadii Ka Soo Baxay Madasha, Iyagoona…………………..
Tifaftiraha K24 10th August 2016